အိန်ဒိယနိုငျငံက ပဲစငျးငုံနှငျ့ မတျပဲတငျသှငျးခှငျ့ပွုသညျ့ ကာလတိုးမွှငျ့မှု မွနျမာကုနျသညျမြားကွိုဆို | Popular
အိန်ဒိယကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဌာနက ပဲတီစိမျး၊မတျပဲနှငျ့ပဲစငျးငုံတို့အား အမိနျ့ကွျောငွာစာထုတျပွနျပွီး အဆိုပါပဲမြားအား လှတျလပျစှာတငျသှငျးခှငျ့ပွု သညျ့ကာလအား ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရကျအထိတိုးမွှငျ့ သတျမှတျလိုကျသညျဟု နယူးဒလေီမွို့ရှိ မွနျမာသံရုံးမှ စီးပှားရေးသံမှူး ဦးနအေေးလှငျ၏ ပွောကွားခကျြကို ကိုးကားပွီး နစကစီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာနက ဖျောပွသညျ။
အိန်ဒိယက ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရကျတှငျ ပဲတီစိမျးတငျသှငျးမှုအတှကျအမိနျ့ကွျောငွာစာ အမှတျ S.O. 5317(E) ကိုလညျးကောငျး၊ မတျပဲနှငျ့ ပဲစငျးငုံတငျသှငျးခွငျးအတှကျ အမိနျ့ ကွျောငွာစာအမှတျS.O. 5318(E) အားလညျးကောငျး ထုတျပွနျလကျြ အဆိုပါပဲမြားအား လှတျလပျစှာတငျသှငျးခှငျ့ပွု သညျ့ကာလကို ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရကျအထိတိုးမွှငျ့ သတျမှတျလိုကျခွငျးဖွဈသညျဟု သိရသညျ။
အိန်ဒိယကူးသနျးရောငျးဝယျရေးနှငျ့စကျမှုဝနျကွီးဌာနသညျ ပဲစငျးငုံ၊ ပဲတီစိမျးနှငျ့မတျပဲတို့အား ကနျ့သတျကုနျစညျအဖွဈမှလှတျလပျစှာ (Free)တငျသှငျးခှငျ့ပွုသညျ့ကုနျစညျအဖွဈသို့ ပွောငျးလဲသတျမှတျလကျြ တငျပို့ရာဒသေ၌ Bill of Loadingထုတျပေးခွငျးကို ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ရကျအထိလညျးကောငျး၊ အိန်ဒိယဆိပျကမျးမြား၌ ကုနျစညျမြားအား ဆိပျကမျးရှငျးလငျးခွငျးကို၃၁-၁- ၂၀၂၂ ရကျနောကျဆုံးထား၍လညျး ကောငျး တငျသှငျးခှငျ့ပွုခဲ့ခွငျးအား ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရကျအထိတိုးမွှငျ့ သတျမှတျလိုကျခွငျးဖွဈသညျ့အပွငျ ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရကျ မတိုငျမီ တငျပို့ရာဆိပျကမျးမှ Bill of Loading ထုတျပေးခဲ့ပါကအိန်ဒိယနိုငျငံရှိ ဆိပျကမျးမြားတှငျအကောကျခှနျနှငျ့ ဆိပျကမျး ရှငျးလငျးမှုလုပျငနျးမြားကို ၃၀-၆-၂၀၂၂ ရကျ နောကျဆုံးထား၍ ဆောငျရှကျခှငျ့ပွုမညျ ဖွဈကွောငျးလညျး နယူးဒလေီမွို့ရှိ မွနျမာသံရုံးမှ စီးပှားရေးသံမှူး ဦးနအေေးလှငျက ပွောကွားထားသညျ။
အိန်ဒိယ အစိုးရက အဓိက ပဲသုံးမြိုးအား လှတျလပျစှာတငျသှငျးခှငျ့ကာလ တိုးမွှငျ့ခဲ့မှု အပျေါ ပဲကုနျသညျအသိုငျးအဝိုငျးက ကွိုဆိုလကျြ ရှိကွသျောလညျး ပွညျပမှပဲမြား ဈေးနှုနျးသကျသာ စှာဖွငျ့ ဝငျရောကျလာပါက ၎င်းငျး တို့၏ ဝငျငှရေရှိမှုအား ထိခိုကျမှုရှိလာနိုငျမညျ့အရေးကို အိန်ဒိယ ပွညျတှငျး စိုကျပြိုးထုတျလုပျသူမြားက စိုးရိမျမကငျး ဖွဈပျေါလကျြရှိနကွေသညျ။
Kalaburgi ရှိ ကာနာတကာပရာဒရှေျ့ ပဲစငျးငုံစိုကျပြိုးသူမြားအသငျးဥက်ကဋ်ဌ Mr Basa-varaj Ingin က အစိုးရ၏ ယခုဆောငျရှကျခကျြမှာ ကောငျးမှနျသညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြဟု မဆိုနိုငျကွောငျး၊ပဲမြားလှတျလပျ စှာ တငျသှငျးခှငျ့ပွုခွငျးသညျ ယခု နှဈ၌ စိုကျပြိုးထုတျလုပျသူမြားအတှကျ ထိခိုကျမှု ဖွဈစရေုံသာမက နောငျလာ မညျ့ သီးနှံ ရာသီ၌ စိုကျပြိုးထုတျလုပျမှုအပျေါကိုလညျး သကျရောကျ မှုရှိကွောငျး၊ သို့ဖွဈရာ အစိုးရအနဖွေငျ့ အရေ အတှကျအရ ကနျ့သတျမှုအခြို့ကို လုပျဆောငျ သငျ့ကွောငျး ပွောဆိုသညျ။
တနျဇနျးနီးယား နိုငျငံပဲမြိုးစုံ ကှနျရကျ (Tanzania Pulses Network)၌ တှဲဖကျပူးပေါငျး ဆောငျရှကျရေးမှူးအဖွဈ တာဝနျယူ လကျြရှိ သောMr Zirack Andrewက အိန်ဒိယအစိုးရ၏ ပဲမြား လှတျလပျစှာ တငျသှငျးခှငျ့ကာလ တိုးမွှငျ့ကွောငျး ကွညောခကျြမှာ ၎င်းငျးတို့အတှကျ သတငျး ကောငျးပငျဖွဈကွောငျး၊ ကနဒေါနိုငျငံနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံတို့၏ နောကျ၌ အိန်ဒိယ၏ တတိယမွောကျ ပဲအမြားဆုံး တငျသှငျးရာ နိုငျငံအဖွဈ ရောကျရှိလာခဲ့သော တနျဇနျးနီးယားရှိ ပို့ကုနျလုပျငနျး ရှငျမြား အတှကျ အိန်ဒိယနိုငျငံနှငျ့ ဆကျ စပျ၍ စီးပှားရေးလုပျဆောငျ ရနျ ယုံကွညျမှုကို ပွနျလညျမွှငျ့တငျရာ၌အထောကျ အကူပွုကွောငျး ပွောဆိုသညျ။
မွနျမာနိုငျငံ၌ ပဲမြိုးစုံတငျပို့မှုကို လုပျဆောငျ လကျြရှိသော OATA ကုနျသညျအသငျး ဥက်ကဋ်ဌ MrVatsalLilani ကလညျး အိန်ဒိယအစိုးရ၏ ယခု လုပျဆောငျခကျြသညျ ကုနျသှယျမှုလုပျငနျးမြား တညျငွိမျမှုရရှိစသေကဲ့သို့ စဉျဆကျမပွတျ ကုနျစညျပို့ဆောငျနိုငျရေးအတှကျလညျး အထောကျ အပံ့ပွုကွောငျး၊ ထို့ပွငျ အိန်ဒိယနှငျ့ပဲ တငျပို့သညျ့ နိုငျငံမြား၌ ဈေးနှုနျးတညျငွိမျမှုကိုလညျး သခြော ခိုငျမာစကွေောငျး၊ အိန်ဒိယအာဏာပိုငျမြား၏ ယခု ကဲ့သို့ လကျတှေ့ ကသြော ကုနျသှယျရေးမူဝါဒ ခမြှတျဖျောဆောငျမှုကို မွနျမာကုနျသညျအသိုငျး အဝိုငျးကလညျး ဝမျးမွောကျစှာ ကွိုဆိုကွောငျးဖွငျ့ နယူးဒလေီမွို့ရှိ မွနျမာသံရုံးမှ စီးပှားရေးသံမှူး ဦးနအေေးလှငျ၏ ပွောကွားခကျြကို ကိုးကားပွီး နစကစီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာနက ဖျောပွသညျ။
လကျရှိမီနီဘတျဂကျြကာလ (အောကျတိုဘာ-ဒီဇငျဘာ) သုံးလအတှငျး မွနျမာနိုငျငံက အမရေိကနျ ဒျေါလာ ၂၉၁.၈၉ သနျးတနျးဖိုးရှိ ပဲမြိူးစုံတနျခြိနျ ၃၅၄၂၁၈ ကို တငျပို့နိုငျခဲ့သညျဟု နစက စီးပှားကူးသနျးဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျထားကာ ပငျလယျရကွေောငျးမှ ကနျဒျေါလာ ၂၇၃.၅၆ သနျး တနျဖိုးရှိ ပဲမြိုး စုံတနျခြိနျ ၃၃၄၆၁၂ ကိုတငျပို့ခဲ့ပွီး နယျစပျလမျးကွောငျးမှတဈဆငျ့ ဒျေါလာ ၁၈.၃ သနျးတနျဖိုးရှိ ပဲတနျခြိနျ ၁၉၆၀၅ ကို အိမျနီးခငျြးနိုငျငံမြားထံ တငျပို့ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟုသိရသညျ။
Photo Credit _ Myanmar Digital News
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ပဲစင်းငုံနှင့် မတ်ပဲတင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် ကာလတိုးမြှင့်မှု မြန်မာကုန်သည်များကြိုဆို
အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနက ပဲတီစိမ်း၊မတ်ပဲနှင့်ပဲစင်းငုံတို့အား အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်ပြီး အဆိုပါပဲများအား လွတ်လပ်စွာတင်သွင်းခွင့်ပြု သည့်ကာလအား ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရက်အထိတိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်သည်ဟု နယူးဒေလီမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူး ဦးနေအေးလွင်၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး နစကစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖော်ပြသည်။
အိန္ဒိယက ၂၀-၁၂-၂၀၂၁ ရက်တွင် ပဲတီစိမ်းတင်သွင်းမှုအတွက်အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် S.O. 5317(E) ကိုလည်းကောင်း၊ မတ်ပဲနှင့် ပဲစင်းငုံတင်သွင်းခြင်းအတွက် အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်S.O. 5318(E) အားလည်းကောင်း ထုတ်ပြန်လျက် အဆိုပါပဲများအား လွတ်လပ်စွာတင်သွင်းခွင့်ပြု သည့်ကာလကို ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရက်အထိတိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
အိန္ဒိယကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသည် ပဲစင်းငုံ၊ ပဲတီစိမ်းနှင့်မတ်ပဲတို့အား ကန့်သတ်ကုန်စည်အဖြစ်မှလွတ်လပ်စွာ (Free)တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့်ကုန်စည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လျက် တင်ပို့ရာဒေသ၌ Bill of Loadingထုတ်ပေးခြင်းကို ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ရက်အထိလည်းကောင်း၊ အိန္ဒိယဆိပ်ကမ်းများ၌ ကုန်စည်များအား ဆိပ်ကမ်းရှင်းလင်းခြင်းကို၃၁-၁- ၂၀၂၂ ရက်နောက်ဆုံးထား၍လည်း ကောင်း တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းအား ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရက်အထိတိုးမြှင့် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည့်အပြင် ၃၁-၃-၂၀၂၂ ရက် မတိုင်မီ တင်ပို့ရာဆိပ်ကမ်းမှ Bill of Loading ထုတ်ပေးခဲ့ပါကအိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဆိပ်ကမ်းများတွင်အကောက်ခွန်နှင့် ဆိပ်ကမ်း ရှင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းများကို ၃၀-၆-၂၀၂၂ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း နယူးဒေလီမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူး ဦးနေအေးလွင်က ပြောကြားထားသည်။
အိန္ဒိယ အစိုးရက အဓိက ပဲသုံးမျိုးအား လွတ်လပ်စွာတင်သွင်းခွင့်ကာလ တိုးမြှင့်ခဲ့မှု အပေါ် ပဲကုန်သည်အသိုင်းအဝိုင်းက ကြိုဆိုလျက် ရှိကြသော်လည်း ပြည်ပမှပဲများ ဈေးနှုန်းသက်သာ စွာဖြင့် ဝင်ရောက်လာပါက ၎င်း တို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှုအား ထိခိုက်မှုရှိလာနိုင်မည့်အရေးကို အိန္ဒိယ ပြည်တွင်း စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများက စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေကြသည်။
Kalaburgi ရှိ ကာနာတကာပရာဒေ့ရှ် ပဲစင်းငုံစိုက်ပျိုးသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌ Mr Basa-varaj Ingin က အစိုးရ၏ ယခုဆောင်ရွက်ချက်မှာ ကောင်းမွန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်ဟု မဆိုနိုင်ကြောင်း၊ပဲများလွတ်လပ် စွာ တင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်းသည် ယခု နှစ်၌ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများအတွက် ထိခိုက်မှု ဖြစ်စေရုံသာမက နောင်လာ မည့် သီးနှံ ရာသီ၌ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ကိုလည်း သက်ရောက် မှုရှိကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ရာ အစိုးရအနေဖြင့် အရေ အတွက်အရ ကန့်သတ်မှုအချို့ကို လုပ်ဆောင် သင့်ကြောင်း ပြောဆိုသည်။
တန်ဇန်းနီးယား နိုင်ငံပဲမျိုးစုံ ကွန်ရက် (Tanzania Pulses Network)၌ တွဲဖက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူ လျက်ရှိ သောMr Zirack Andrewက အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ပဲများ လွတ်လပ်စွာ တင်သွင်းခွင့်ကာလ တိုးမြှင့်ကြောင်း ကြေညာချက်မှာ ၎င်းတို့အတွက် သတင်း ကောင်းပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့၏ နောက်၌ အိန္ဒိယ၏ တတိယမြောက် ပဲအများဆုံး တင်သွင်းရာ နိုင်ငံအဖြစ် ရောက်ရှိလာခဲ့သော တန်ဇန်းနီးယားရှိ ပို့ကုန်လုပ်ငန်း ရှင်များ အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ဆက် စပ်၍ စီးပွားရေးလုပ်ဆောင် ရန် ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်မြှင့်တင်ရာ၌အထောက် အကူပြုကြောင်း ပြောဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုကို လုပ်ဆောင် လျက်ရှိသော OATA ကုန်သည်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ MrVatsalLilani ကလည်း အိန္ဒိယအစိုးရ၏ ယခု လုပ်ဆောင်ချက်သည် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများ တည်ငြိမ်မှုရရှိစေသကဲ့သို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ကုန်စည်ပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်လည်း အထောက် အပံ့ပြုကြောင်း၊ ထို့ပြင် အိန္ဒိယနှင့်ပဲ တင်ပို့သည့် နိုင်ငံများ၌ ဈေးနှုန်းတည်ငြိမ်မှုကိုလည်း သေချာ ခိုင်မာစေကြောင်း၊ အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များ၏ ယခု ကဲ့သို့ လက်တွေ့ ကျသော ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒ ချမှတ်ဖော်ဆောင်မှုကို မြန်မာကုန်သည်အသိုင်း အဝိုင်းကလည်း ဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုကြောင်းဖြင့် နယူးဒေလီမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူး ဦးနေအေးလွင်၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကားပြီး နစကစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖော်ပြသည်။
လက်ရှိမီနီဘတ်ဂျက်ကာလ (အောက်တိုဘာ-ဒီဇင်ဘာ) သုံးလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံက အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၂၉၁.၈၉ သန်းတန်းဖိုးရှိ ပဲမျိူးစုံတန်ချိန် ၃၅၄၂၁၈ ကို တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်ဟု နစက စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားကာ ပင်လယ်ရေကြောင်းမှ ကန်ဒေါ်လာ ၂၇၃.၅၆ သန်း တန်ဖိုးရှိ ပဲမျိုး စုံတန်ချိန် ၃၃၄၆၁၂ ကိုတင်ပို့ခဲ့ပြီး နယ်စပ်လမ်းကြောင်းမှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာ ၁၈.၃ သန်းတန်ဖိုးရှိ ပဲတန်ချိန် ၁၉၆၀၅ ကို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများထံ တင်ပို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။
ဆောတိမွို့နယျရှိ ကြေးရှာသုံးရှာအနီး တိုကျပှဲဖွဈပှားမှုမြားကွောငျ့ ဒသေခံ ၅၀၀ နီးပါးထှကျ ပွေးတိမျးရှောငျ